Umgangatho ophezulu weNtloko yomsuki wewasha uMvelisi kunye noMthengisi | Yanzhao
I-washer yasentwasahlobo yi-helix yesandla sasekhohlo kwaye ivumela umsonto ukuba uqiniswe kwicala lasekunene kuphela, okt ulwalathiso lwewotshi. Xa kusetyenziswa ukujika kwesandla sasekhohlo, umda ophakanyisiweyo uluma ungene emazantsi e-bolt okanye nut kunye nenxalenye ebotshelelwe kuyo, ke oko kukuchasa ukujika. Ke ngoko, iiwasha zentwasahlobo azisebenzi kwimisonto yesandla sasekhohlo nakwimigangatho eqinileyo. Kananjalo, azizukusetyenziswa ngokudibene ne-washer ethe tyaba phantsi kwe-washer yasentwasahlobo, njengoko oku kukwahlula isherher yasentwasahlobo ekulungeni iye kwicandelo elingayi kuvuma ukujika.
Isibonelelo sentsimbi yokutshixa kwentwasahlobo ilele kwimilo yetrapezoidal yewasha. Xa ucinezelwe kwimithwalo kufutshane namandla obungqina bebhanti, iya kuguquka kwaye icabalele. Oku kunciphisa inqanaba lentwasahlobo lendibaniselwano evaliweyo evumela ukugcina amandla ngakumbi phantsi kwenqanaba elifanayo lokungcangcazela. Oku kuthintela ukukhululeka.
I-washer yasentwasahlobo ithintela amantongomane kunye neebhanti ekujikeni, ekutyibilikeni nasekuphumeni ngenxa yentshukumo kunye netorque. I-washer yasentwasahlobo eyahlukeneyo yenza lo msebenzi ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukubamba i-nut kunye ne-bolt endaweni yayo. Amanye ama-washer entwasahlobo afezekisa lo msebenzi ngokuluma kwizinto ezisisiseko (i-bolt) kunye nenut kunye neziphelo zazo.
I-washers yasentwasahlobo zihlala zisetyenziswa kwizicelo ezibandakanya ukungcangcazela kunye nokushenxiswa okunokwenzeka kwezinto zokubopha. Amashishini ahlala esebenzisa iiwasha zasentwasahlobo ezinxulumene nezothutho (iimoto, iinqwelomoya, ulwandle). Izixhobo zokuhlambela zasentwasahlobo zinokusetyenziswa nakwizinto zasendlini ezifana nezinto zokuphatha umoya kunye nezokuhlamba iimpahla (oomatshini bokuhlamba iimpahla).
Ubukhulu 2.3 2.8 3.3 4.4 5.4 6.7 8.7 10.7 12.8 14.9
Ubukhulu 0.68 0.9 1.1 1.3 1.7 2.1 2.65 3.15 3.7 4.2
Ubukhulu 1.5 2.1 2.6 3 4 5 6.5 8 9 10.5
Ubunzima≈ikg 0.023 0.053 0.097 0.182 0.406 0.745 1.53 2.82 4.63 6.85
Ubukhulu 16.9 19.1 21.3 23.3 25.5 28.5 31.5 37.8 43.8 50.2
Ubukhulu 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 6.8 7.3 8.3 9.3
Ubukhulu 10.5 11.5 13 13 15 15 17 18 21 23
Ubunzima≈ikg 7.75 11 15.2 16.5 26.2 28.2 37.6 51.8 78.7 114
Egqithileyo Iwashi yasendlwini
Okulandelayo: Iiankile Zokudiliza
I-6mm yewasha yasentwasahlobo
I-Coil ephindwe kabini yeWashhers
Din6921 esisangqa Amandongomane, Amandla aphakamileyo eHex Bolts, I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, I-Hexagon Socket Head Bolts, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts, Iibholiti,